VaBiti Vanoti Vekunze Voronga Kubatsira Zimbabwe neMari
Kubvumbi 08, 2009
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanoti pane mabhanga mazhinji emunyika dzemuAfrica pamwe nemuEurope akavimbisa kubatsira Zimbabwe nemari kuitira kuti igadzirise hupfumi hwayo.
VaBiti vataura mashoko aya mushure mekuita musangano nevakuru vakuru vemabhanga pamwe nebhanga guru renyika. Vatiwo hurumende yava kudzosa kushandiswa kwema RTGS nemacheki kuitira kuti vanhu vasafambe nemari dzakawandisa.
Vachitaurawo nevatori venhau muHarare, mumiriri weAmerica muZimbabwe, VaJames McGee, vati vari kufadzwa zvikuru nebasa riri kuitwa nebazi rezvemari. VaMcGee vakurudzira basa riri kuitwa negurukota rezvemari, VaBiti, asi vakati kunyange hazvo hurumende yavo iri kufadzwa nezviri kuitwa pari zvino, pachine zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende yemubatanidzwa.
Vati zvinoda kugadziriswa zvinosanganisira nyaya dzemitemo, kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. VaMcGee vati hurumende yavo icharamba ichabatsira vanhu vemuZimbabwe, asi zvekubatsira hurumende zvichazoitika chete kana hurumende yeAmerica yanyatsogutsikana negwara riri kutorwa nehurumende yemubatanidzwa.